कान्तिपुर गाथा : गडबड सिस्टममाथि कनिकाको अन्तर्वार्ता
1st September 2017 | १६ भदौ २०७४
आफैसँग इतरिँदै थिइ कनिका – अँखिया मिलाके जिया भरमा के चले नही जाना... उसको शरीरमा स्फुर्ति थियो, दिमाग खुला र मन चङ्गा।
देशमा हिजोसम्म वुध्द र गोविन्द केसी निकै पपुलर थिए। तर, हिजोदेखि उनको पनि लाइक घटेको छ। ट्विट गरेको सत्यको खासै रेस्पोन्स नआएपछि उ चकित परेकी थिइ। के भएछ देशमा? उसको पर्यवेक्षणमा कांग्रेसका केही सांसदले संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावका कारण सामाजिक संजाल चुमुर्किएका रहेछन्। कनिकालाई लाग्यो, प्रस्ताव सांसदहरुले दर्ता नै गराइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सांसद वा अदालतका मानिससँग कुरा गरेर आउने केही होइन। बरु, ती मानिससँग कुरा गरे उपयोगी होला। उसले समाचारमा हेरी, कांग्रेसका त्यतिखेरका तीन जना जव्वर नेताले सजाय पाएका रहेछन अदालतबाट। ती मध्ये खुमबहादुर खड्का मिर्गौलाका बिरामी, गोविन्दराज जोशी मुटुका विरामी। बेला बेलामा विरामी परे पनि स्वस्थ्य कहलिएका चिरन्जीवी वाग्ले सजाय भोगेर पलायन भइसकेका व्यक्तित्व।
कनिकालाई यो पूरै कुरा कताकता अमिल्दो लाग्यो। देशलाई साँघुरो पाइपको ढुङ्ग्रोमा जबर्जस्ती कोचेर निसासिन बाध्य तुल्याउने यी तीन मात्रै हुन त? अनि, यो देश कांग्रेसले मात्रै बिगारेका हुन् कि यसमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र अरु दलका सांसद पनि सामेल छन? दूधले धोएका कति जना सांसद संसदमा छन? उसले सुदिप्तीलाई मनको कुरा बताइ र भनी - यति ठूलो इस्सूलाई किनारामा राखेर त के अनलाइन चलाउनु? सुदिप्तीले सुनी। तर, कुनै जवाफ दिइन। यसको जवाफ दिएर उ अनलाइन व्यवस्थापक र इनभेष्टरलाई तर्साउन तयार थिइन।
सुदिप्तीले यो विषयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद आकाशको अन्तर्वार्ता लिने सल्लाह दिइ। आकाश कांग्रेसका चल्तापूर्जा जल्दाबल्दा युवा नेतामध्येका एक थिए। उनको बोलीमा मिठास थियो। शरीर सुगठित थियो – कुनै पनि युवतीले आशा गर्ने जस्तो। उनको वरपर प्रतिवध्द युवा कांग्रेसहरुको भीड लाग्दथ्यो। कनिकाले आकाशलाई कल गरी टाइमका लागि। पहिले त आकाशले निकैबेर टालटुल गर्यो। पछि कनिकाले लाजै नमानी भनी, लौ त सांसदज्यू, म जत्तिको आकर्षक रिपोर्टरसँग पनि कुरा गर्न तयार हुनुहुन्न भने सिष्टममा कुनै गडवडी रहेछ भन्नु पर्‍यो। ओके। त्यसपछि उसले फोन डिस्कनेक्ट गरी।
लौ यो सांसदले त अन्तर्वार्ता दिएन। अब के गर्ने? आकाशको घर बाहिरको रेष्टुरेण्टमा कफी पिउँदै सोच्दै थिइ कनिका। केही छिनमा नै उसको फोनको रिङटोन बज्यो। स्क्रीनमा आकाशको नाम मिल्किइ रहेको थियो। कनिकाले फोन रिसिव गरी। एकैछिनमा उसको मुख हँसिलो भयो।
कनिकाले कफीको पैसा पनि नतिरी दौडाइ स्कूटर। आकाशले उसलाई दरवारमार्ग बोलाएको थियो। उ नियत समयमा नै पुगी भेन्युमा।
निकाका लागि यो भेन्यू नौलो थियो। दरवारमार्गका सबै रेष्टुराँ चहारी सकेकी रिपोर्टर यो भेन्यूमा नपुग्नु अनौठै थियो। अँगेनी, उसले मेनुमा नाम पढी रेष्टुराँको। त्यसपछि आकाशको अनुहारमा हेरी। कनिकाको ओपन सोल्डर तिर हेर्दै आकाशले भन्यो, ‘सोध्नुहोस्। के सोध्न चाहनुहुन्छ?’
– भ्रष्टाचारको विषयमा तपाईँको पार्टीभित्र मात्रै किन बढी बवाल हुने गर्दछ? तपाईंको पार्टीका तीन जना निकै महत्वपूर्ण नेतामाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ। उनीहरु जेल गएका छन्। फेरि पनि जेल जाने सम्भावना रहेको छ भनिन्छ? के हो यो सब?
"अब यो अलिकति हेर्नुस् राजनीति हो। अब अलिकति भ्रष्टाचार पनि हो। हाम्रा यी नेताहरुले जेल सजाय भोगी सकेकाले हामीले कुनै पनि अपराधको सजाय चुक्ता गरी सकेको मानिसलाई राजनीति गर्न दिनु पर्दछ। रोक लगाउन हुन्न भनेका छौं।"
– तपाईंको पार्टीमा नैतिकताका बारे कुनै मानदण्ड बनेको छैन?
"छ नि। किन छैन? यो नैतिकताको प्रश्न सबभन्दा पहिले हामीले नै उठाएका हौं। नारा अरुले लगाउन थाले।"
– यस्ता केसहरुमा किन तपाईँको पार्टीका सांसदहरु नै मुछिन्छन् र पक्राउ पर्छन? के एमाले, माओवादी, राप्रपा र अन्य पार्टीका सांसदहरु दूधले धोएका छन्?
"खोइ म के भनौं? मानिस नुहाउन पुग्ने दूध भै दिएको भए दूधको हाहाकार किन हुन्थ्यो? कुरा यत्ति हा कनिकाजी, अरु पार्टीका नेता गुपचुप खान्छन्। कांग्रेसका नेता खाँदावर्दा थाल टक्टक्याउँछन्। फरक यत्ति हो। यही फरकले गर्दा हामीलाई भूत लगाएर पक्राउन खोजेको हुनुपर्दछ।"
सोध्दासोध्दै कनिका बोर भइ। जति सोधे पनि घुमाइ फेराइ उही आउने जवाफ। उसले सोची, यो निरन्तर छैन पो र। कनिका हाँसी। आज दिनभरि नै उ हाँसेकी छ। अब त अर्को साता हाँस्ने – उ मनमनै भन्छे। गणेशजीलाई लड्डु चढाएपछिको अवस्था वुझेपछि उ मरीमरी हाँस्छे।
(तीन दशकदेखि निरन्तर लेखिएको किशोर नेपालको 'कान्तिपुर गाथा' तन्नेरी पुस्ताले रुचाएको लोकप्रिय सिर्जना हो। परम्पराका नाममा हुर्काइएका पाखण्डमाथि कटाक्ष र स्वतन्त्र बाँच्न चाहने तन्नेरी पुस्ताको यायावरी जीवनको वर्णन गाथाको मुख्य पक्ष हो। टेलिसिरियल शैलीमा लेखिएका गाथा हरेक हप्ता पहिलोपोस्टमा)